Tafa : Ireo Loabary An-dasy TEDx Mba Hanosehana An’i São Tomé Ho Eny Anoloan’ny Sehatra · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Mário Lopes Nandika (en) i Janet Gunter, Abdoulaye Bah, nirinandrea
Voadika ny 31 Desambra 2017 19:46 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2013)
[Fanamarihana avy amin'ny mpanonta : Ny mpanoratra ity fanadihadiana ity dia mpikambana ao amin'ny TEDxSão Tomé ihany koa]
TEDx, ilay avy ao an-toerana, nomanin'izy ireo ihany ho an'ireo loabary an-dasy TED, efa mipariaka any amin'ny firenena miteny Portiogey toa an'i Portogaly, Angola ary i Brezila. Ny volana lasa teo, tonga tao São Tomé, ilay programam-panehoana, nosy iray ao São Tomé sy ao Afrika. Miaraka aminà famelabelarana maharitra 18 minitra izay nozaraina tanaty aterineto, TEDx dia mampivondrona olona maro manana fahaiza-mamorona mba ” hifampizara hevitra mendrika ho hapariaka”.
Global Voices, nihaona vao tsy ela akory izao tamin'ilay tompon'andraikitry ny TEDxSão Tomé, Ramatoa Katya Aragão, mba hiresaka mikasika ireo ekipa mpikarakara ilay loabary an-dasy, ny fiovana entiny ao amin'io firenena kely io ary zavatra maro hafa ihany koa.
Global Voices Online (GVO): Ahoana no nananareo hevitra ny hampiditra ny TEDx tao São Tomé ?
Katya Aragão (KA): Tsy hevitra fotsiny ihany ilay izy, ny fitondrana ny TEDx ao São Tomé-sy-Principe dia tena ilaina mihitsy, satria mbola tsiambaratelo miafina io firenena io. Etsy ankilany, toerana natao ho an'ny fizahantany lafo vidy izahay, ary miaraka amin'izany dia tsy tratry amin'ny fizahantany natao ho an'ny daholo be. Etsy an-daniny, ny maha firenena “tsy fantatry” ny tontolo ivelany dia mbola sakana iray hafa koa ho an'i São Tomé-sy-Principe, izay sady kely lalam-barotra no mbola mijaly vokatry ny fitokana-moniny ihany koa
Tazonina ho laharam-pahamehana foana ny tanjona fototr'ilay Fikambanana tsy miankina Galo Cantá, izay mpikarakara ny TEDxSãoTomé, dia ny hoe fampahafantarana an'i São Tomé sy Principe, nihevitra izahay fa ny fametrahana azy eo ambony marika sy hetsika maneran-tany no fomba tsara indrindra ho amin'izany
GVO: Inona no lojika ambadik'ilay lohahevitra manao hoe “São Tomé-sy-Principe= Afrika mifandray amin'ny tontolo » ?
KA: Noho izahay miaina ao amin'io firenena io : Ny fisokafan'ny tsenan'ny fifandraisana, ny fisian'ny revolisiona informatika ao an-toerana hatramin'ny fahatongavan'ny hosona mampiasa tara-pahazavana (cable a fibre optique) sy ny Aterneto 3G. Tapaka ny hevitray fa hampiasa vola amin'ny sehatry ny fifandraisana eo amin'ireo firenena roa ireo izay mitambatra ho ny vondronosy São Tomé sy Principe, ary ny fifamatoran'io firenena io sy ny Tanibe Afrikana, ary ny fahaizan'ny mponina Santomeana misokatra amin'izao tontolo izao.
Nomenay ny anarana hoe “Nosy mifandray : São Tomé-sy-Principe = Afrika mifandray amin'ny tontolo!” ilay lohahevitra ary teny filamatray ny hoe “Mifandray amin'izao tontolo izao” !
GVO: Inona no tena teboka ivon'ny TEDxSãoTomé ary ahoana no fandraisan'ny mponin'i São Tomé azy ?
KA : Ny teboka ivony aloha dia ireo hevitra sy vinavina misy fiantraikany ao an-toerana. Nomena ny anaran'ilay renivohitra mandray azy -São Tomé- ny TEDxSãoTomé, maneho ny maha-ivo, amin'ny dikany malalaka eo amin'ny fifampizarana sy ny filàna ” ny fisainana malalaka sy fanaovan-javatra ao an-toerana”, ka tazonina ao an-tsaina foana ny elanelan'ny halaviran'ireo nosy ireo. Noho izany, mifandray tendro amin'ilay lohahevitra nosafidiana tamin'ity taona ity izany : Nosy mifandray.
Ilay fikambanana tsy miankina Galo Cantá dia mikasa ny hametraka ny TEDxSãoTomé ho sehatra iray hanaparitahana hevitra sy vinavina miaraka aminà hevitra hanasoa ny firenena, mandray anjara amin'ny fahitana azy, ary mipetraka ho mpanelanelana eo amin'ny mpamatsy vola sy ny mpisehatra. Izany hoe, ambohipihaonan'ireo manana hevitra tsara sy ireo manana ny fahafahana hanatanteraka izany.
Ho an'ireo mponina ao São Tomé, tena zava-baovao sy tsy mbola fantatra ny TEDx, kanefa azon'ireo Saotomeana ireo fa misy ifandraisany amin'ny fampandrosoana izany, io no fiteny tena ampiasaina rehefa miresaka ny hoe TEDxSãoTomé. Mbola mila ezaka be ny amin'ny fahampahafantarana azy hahafahan'ny olona mahatsapa ny lanjan'ireo hetsika ireo. Efa miasa amin'io teboka iray io izahay, saingy satria hetsika mpiseho isan-taona ilay izy, antenainay hahafantatra tsikelikely anay ny olona rehetra ao São Tomé sy Principe.
Ramatoa Katya Aragão/TEDxSão Tomé/nahazoana alalàna ny famoahana azy
GVO: Tsikaritray fa misy olona 13 anatin'ilay ekipa. Ahoana no nifaneraserana nahafahana nanatontosa tanjona iray iraisana ?
KA: Ny tena marina 12 izahay, ary tena nahatalanjona ny fizotran'ny fifaneraserana. Raisiko ho niangaran'ny vintana aho miaraka miasa amin'ny olona tsy mora kivy. Natambatry ny zavatra iray izay efa mila tsy ho hita eny amin'ny tanora ankehitriny intsony izahay : ny fanantenana ! Matoky ny tenanay izahay, matoky ny herin'ny tanora izahay ary matoky an'i São Tomé sy Principe
GVO : Hitanay koa fa ankoatra ireo mpandray anjara avy ao São Tomé sy Principe, misy hafa maro avy amin'ny firenena hafa ihany koa, manomboka amin'ny Mark Shuttleworth avy ao Afrka Atsimo ka hatramin'i Bob Drewes avy any Etazonia. Inona no teboka itovian'ireo vahininareo ireo ?
KA: Ny Iraisana dia i São Tomé sy Príncipe. Mark Shuttleworth sy i Bob Drewes, olona samy manana fitiavana manokana an'io firenena io. Mark dia isan'ireo mpampiasa vola ngezalahy ao an-toerana, ary tena liana manokana amin'ilay nosy Principe. I Bob indray, mitsidika matetika ireo nosy ireo manao asa mahafinaritra mikasika ny “biodiversité” (fifangaroan'ny zavamiaina) . Efa eo ho eo amin'ny 13 taona teo izao no nivezivezy teto izy.
GVO: Araky ny hevitrao, Inona no vokatra fohy sy lavitra ezaka mety ho entin'ny hetsika lehibe tahaka izao ho an'ny fiarahamonina ao São Tomé ?
KA: Koa satria ny tanora mpandraharaha no tena kendrenay, io seha-pifaneraserana io izany dia ahafahan'ireo vahiny sy mpikarakara hifandray anaty fotoana fohy amin'ireo olona nanatrika ary hijery fiarahamiasa aminà vinavina fampandrosoana mahaliana, eo amin'ny olona izay niandry fotsiny haheno tantaran'olona mahaliana iray mba hahafantarany ny maha izy azy, sns… Ho an'ny lavitra ezaka indray, ho lehibe noho izany ny vokatra entiny satria misokatra ho an'ireo hevitra sy volavolan-kevitra ngeza lahy izay mbola hiely manerana ny sehatra isan-karazany izany, mba hahafahan'ny maro hifanakalo hevitra sy hahafahan'ny olona manome lanja azy ihany koa. Ary mazava ho azy, ny vokatra lavitra ezaka iray hafa ihany koa , ny ho fitombon'ny mpitsidika (ny mpamatsy vola sy ny mpizahatany) ao São Tomé-sy-Principe ary torak'izany koa ny fitomboana tsy hita isan'ny fahampahafantarana ny firenena.
Ho hita tsy ho ela ao amin'ny Vohikala sy pejy Facebook n'ny TEDx São Tomé ireo lahatsary tamin'ireo loabary an-dasy.